Iitudiyo Yeyokuqesha ngaphakathi Felixstowe, Suffolk
Real Estate Listings: Residential homes Studios Suffolk Felixstowe
Iitudiyo ngaphakathi Felixstowe
Iitudiyo ngaphakathi Suffolk
Studio To Rent In Felixstowe, Suffolk
Property reference number 5727842. To enquire about this property click the "Request Details" buttonNewly refurbished ground floor studio flat in block of 6 flats, 2 minutes walk to town centre with range of shops, close to sea front and local amenities,5 mins walk to train station and buses, new wh...
Felixstowe in Suffolk, Ip11 7np
Ipapashwe ngu Upad Ltd
umbono Iitudiyo ipapashiwe 1 year ago
Studios For Rent in Felixstowe, Suffolk
Igumbi lesitudiyo-amagumbi amancinci amancinci abucala abizwa ngokuba zi studio, ukusebenza kakuhle okanye amagumbi okusithela e-US, okanye isitayile seflethi e-UK. Ezi zihlala zinegumbi elinye elikhulu elisebenza njengegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye negumbi lokulala lihlanganisiwe kwaye lihlala libandakanya izibonelelo zasekhitshini, kunye negumbi lokuhlambela elincinci elahlukileyo. Igumbi lokulala i-UK liyahluka kwenye indawo yokuhlala kwigumbi elinye elibandakanya indawo yokuhlambela ekwabelwana ngayo nezinye iibhedi. EKorea, igama elithi igumbi elinye (ewinini) libhekisa kwigumbi le studio.  Ukunyuka kwezi ndawo ngamagumbi anokulala kwigumbi elinye, apho igumbi lokulala lahlukile kwigumbi lokuhlala, lilandelwa ngamagumbi amabini okulala, amagumbi okulala amathathu, njl.namagumbi (amagumbi anamagumbi okulala angaphezu kwamathathu anqabile kwiimarike ezininzi eziqeshiswayo) . Amagumbi amancinci ahlala enendawo enye yokungena. Amagumbi amakhulu ahlala enendawo ezimbini, mhlawumbi umnyango ngaphambili kunye nomnye ngasemva, okanye ukusuka ngaphantsi komhlaba okanye kwenye indawo enokupakisha indawo yokupaka. Kuxhomekeke kuyilo lwesakhiwo, iminyango yokungena inokunxulumana ngqo ngaphandle okanye kwindawo eqhelekileyo ngaphakathi, enjengehholo lendibano okanye indawo yokulinda.